Yourchịkwa Samsung ngwa ụlọ na olu gị ga-ekwe omume n'oge na-adịghị anya | Akụkọ akụrụngwa
Ebe ọ bụ na Samsung tụnyere Bixby onye enyemaka na-enyere aka, n'agbanyeghị na enweghị ọganihu mbụ ọ nwere ike ịtụ anya ya, ọ bụ n'ihi eziokwu na ọ nweghị n'ọtụtụ asụsụ (Bekee na Korea), a ga-atụ anya na n'oge na-adịghị anya emesia ụlọ ọrụ Korea ga-etinye onye inyeaka a n'ọtụtụ ngwa ọrụ ụlọ, àjà a gbakwunyere na rue ugbu a adịghị na ụdị ika ọ bụla.
Samsung abụghị naanị onye ndu ụwa na ekwentị, kamakwa ọ na - arụpụta televishọn, friji, igwe na - asacha igwe ... mejuputa ndi oru enyemaka gi nke Bixby n'ofe ulo oru a, ka anyị nwee ike "kwuo okwu" ma "nye iwu" ka ha laa, gwa anyị ọkwa ha, ịgbanwe ọwa, gbanyụọ ...
Ntaneti ihe di nso. N'oge a, anyị enweghị ike ịchọta ngwa ọrụ ọ bụla dị n'ahịa nke na-aza site na iwu olu, ọ bụ ezie na enwere ụdị nke anyị nwere ike casi jikwaa site na ngwa. Ma njikọta nke Bixby gara n'ihu. Samsung chọrọ ka ofntanetị bụrụ ihe ọ bụghị naanị maka ihe, dị ka bọlbụ ọkụ, mkpọchi, mgbịrịgba ọnụ ụzọ na ihe ndị ọzọ, mana ọ chọrọ ime ka ngwa ngwa ụlọ niile mara ihe.
Samsung na-ezube ịmalite ịpịpụta TV na igwe mmiri na Bixby na mmiri nke afọ a, n'agbanyeghị na n'oge a na-ejedebe ala na mba ebe onye enyemaka dị: United States na South Korea. Izu ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ na-arụ ọrụ ịnye Spanish dị ka asụsụ ọzọ nke kwekọrọ na Bixby, nke mere na n'oge na-adịghị anya, ụdị ngwa ndị a nwekwara ike ịdị na mba ndị na-asụ Spanish, ebe Apple nwere ezigbo mkpa kekọrịta ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụwa nke telephony. Maka ugbu a, anyị ga-echere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Rollingchịkwa ngwa ụlọ Samsung na olu gị ga-ekwe omume n'oge na-adịghị anya
Ọrụ kacha elu: Ọnọdụ ike na Windows 10 iji bulie arụmọrụ